Cations na Co-cations maka Mpaghara SEO | Martech Zone
A na-eji algorithm na-eme ka ihe ndị na-eme ka ọ pụta ìhè n'ihi na ihe niile ọ chọrọ bụ nwa ojii SEO onye na-ewu njikọ njikọ-ọgaranya na saịtị. N'ime oge, n'agbanyeghị ebe e wuru njikọ ndị ahụ, saịtị ahụ ga-ebili n'usoro. Google maara na nchọta njin nchọta ihe ha na-agba ọsọ ma mekwaa algorithms ha iji bulie ọdụ ndị ọzọ dị mma. Ogo saịtị njikọ a na ịdị mkpa nke ọdịnaya ha rụrụ ọrụ dị ka otu ewu ewu saịtị saịtị njikọ na ebe ịga saịtị dị na mgbasa ozi mmekọrịta.
Gịnị bụ aha? Nkọwa okwu?
Abịa na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara yana ogo maka azụmaahịa gị, backlinks na kwuru abụghị naanị egwuregwu. Nkọwapụta Google gara n'ihu na-eto eto maka ịchọpụta izi ezi na ikikere nke azụmaahịa na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara. Nchịkọta abụghị njikọ, ha bụ ederede na-amata ọdịiche dị n'etiti ederede ọzọ na ibe. Otu ihe atụ bụ adreesị zuru ezu na nọmba ekwentị nke azụmahịa gị.
Na enweghị njikọ, Google nwere ike ikpebi ka ewu ewu nke azụmahịa mpaghara gị site na ole saịtị ndị dị elu na-edepụta adreesị azụmahịa gị na / ma ọ bụ nọmba ekwentị. A maara ndị a dị ka amaokwu. Na saịtị ndị ọzọ depụtara amaokwu ndị yiri ya nke jikọtara na saịtị ndị ahụ bụ nkwado aha. Chee echiche banyere ya… adreesị edepụtara na saịtị ọ bụla nwere ike ịmepụta njikọ nke Google chọrọ iji chọpụta mmekọrịta dị n'etiti ọdịnaya na azụmaahịa mpaghara.
Depụta adreesị azụmahịa gị na akara ekwentị na ibe nwere mkpụrụokwu dabara adaba na azụmaahịa gị nwere ike ugbu a nye gị ọkwa maka mkpokọta isiokwu ahụ na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara.
Nke a ọ pụtara na ị ga-aga ịzụta ngwugwu ntinye akwụkwọ maka azụmahịa gị? Ọ dịghị ma ọlị. Google amalitela ịkpa oke maka akwụkwọ ndekọ aha dị ala nke na-ejikọ ugbo maka azụmaahịa. Agbanyeghị, ha na-etinyekwu uche na ntinye amaokwu ndị dị na saịtị dị elu ndị na-edepụta ozi azụmaahịa gị. Ọrụ gị bụ iji hụ na ozi ahụ enyere dị ọhụrụ ma zie ezi!
Gịnị ka ị ga-eme iji nye aka?
Gbalia igunye nke gi aha azụmahịa, adreesị na akara ekwentị na saịtị gị. Gbaa mbọ hụ na ozi ị depụtara ga-agbanwe agbanwe gafee saịtị niile. Anyị na-akwado ndị ahịa anyị bipụtara ozi a n'ụzọ doro anya na ibe ọ bụla.
Depụta ma jigide azụmahịa gị site na iji Google na Bing.
Tinye n'ọrụ snippets bara ụba maka azụmaahịa mpaghara n'ime saịtị gị ka engines ọchụchọ wee nweta ozi dị mkpa.
Mgbe enwere ohere maka azụmahịa gị ka ekwuru n'isiokwu, pịa ntọhapụ ma ọ bụ post blọgụ - gbaa mbọ hụ tinye adreesị nzipu ozi gị na nọmba ekwentị gị. Amaokwu ndị a n'ime ọdịnaya nke isiokwu ndị ịchọrọ iji dị mkpa bara uru.
Kedụ ka ị ga - esi chọta saịtị Ngosipụta?
Whitespark nwere onye na-achọ ihe ntinye aka na mpaghara. Ngwaọrụ ahụ na - enye gị ohere ịbanye keyphrases ma chọpụta ọdịiche ndị ọzọ nke igodo prhases. Ngwaọrụ na-emepụta ndepụta saịtị ntinye aka maka saịtị dị elu. Ọzọkwa, sistemụ ahụ na-enye gị ohere iji chọpụta amaokwu ndị ị nwere ugbu a ka ị ghara igbu oge gị.
Tags: N'ikeamaokwudekọtara ọnụtinyegoogle amaokwunchọta mpagharaakwụkwọ nyocha engine